Ukulamla | Law & More | I-Eindhoven kunye neAmsterdam
Ukuba unembambano nomntu, ufuna ukuba imbambano ixazululwe ngokukhawuleza. Rhoqo imbambano ibangela ukuba iimvakalelo zihambele phezulu, nesiphumo sokuba omabini amaqela angasiboni sisombululo. Ukulamla kunokukutshintsha oko. Ukulamla sisisombululo esidibeneyo sembambano ngoncedo lwembambano yokungathath 'icala: mbambano. Kukho imigaqo esisiseko ebalulekileyo yoxolelwaniso: ngokuzithandela nokugcina iimfihlo. Omabini la maqela ahlala etafileni ngokuzithandela kwaye enesimo sokusebenza. Ukongeza, omabini amaqela athembisa ukugcina imfihlo. Oku kukwasebenza nakumlamli. Umlamli ukhokela zonke iincoko, ubeka iliso kwinkqubo kwaye unceda ukukhangela isisombululo esifanelekileyo.
Kunye no Law & More Uya kufika embindini wengxabano
> 1. Yintoni ulamlamano?
> 2. Kutheni kulamlo?
> 3. Xa kulamlo?
> 4. Kutheni Law & More?
1. Yintoni ulamlamano?
2. Kutheni kulamlo?
Ukulamla kuneenzuzo ezininzi. Kukho izisombululo zokuyila ezininzi ezinokwenzeka ngexesha lokulamla kunakwinkqubo esemthethweni. Rhoqo isisombululo esidibeneyo sinokufikelelwa esonelisa onke amaqela achaphazelekayo.
The Law & More abalamli abathathi isikhundla kwaye bangathathi zigqibo. Uya kuyenza ngokwakho. Uya kuthatha inxaxheba ngenkuthalo kwaye ekugqibeleni uya kufikelela kwisiphumo. Abalamli bethu baya kukukhokela kwaye bakuxhase ekwenzeni oko. Inzuzo ebalulekileyo yoko kukuba omabini amaqela ahlala emandleni wesisombululo kwaye ubudlelwane bakho abuyi konakaliswa ngokungeyomfuneko. Ngokuqinisekileyo oku kubalulekile xa ninobabini abantwana kunye kuba kuya kufuneka nxibelelane kwaye ninxibelelane omnye komnye emva koqhawulo mtshato.
3. Xa kulamlo?
Ukulamla kuluncedo phantse kuzo zonke iingxabano kunye neengxabano, zobuqu kunye nezamashishini.
• Ulungiselelo lonxibelelwano
• Iingxaki zentsebenziswano
Iimbambano zeshishini- nl
4. Kutheni Law & More?
Uqinisekisiwe ngomgangatho, omabini kwicandelo lezomthetho njengakwiseshoni yokulamla.
Kunye neyakho Law & More umlamli uya kuxoxa ngayo yonke imiba kunye nembali yembambano yempikiswano kuqala. Emva koko uya kuthetha malunga neziphakamiso ezifanayo ukuze ufumane isisombululo.
• Yeyakho Law & More Umlamli ukhokela ukubonisana, uqinisekisa ngoncedo lwezomthetho kunye nolweemvakalelo kwaye uthathela ingqalelo izinto zomdla amaqela omabini ngexesha lokubonisana.
Ngexesha lonke lenkqubo yolamlo kuya kuqwalaselwa imbali yakho, iimvakalelo kunye nezinto onomdla kuzo.
Ekupheleni kwenkqubo yokulamla Law & More Umlamli uyakuqinisekisa ukuba zonke izivumelwano ezenziweyo phakathi kwakho nelinye iqela ziya kubekwa phantsi ngononophelo kwisivumelwano esibhaliweyo sokuphelisa isivumelwano.